नयाँ मान्छेसँग नयाँ 'ट्यालेन्ट' हुन्छ :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
नयाँ मान्छेसँग नयाँ 'ट्यालेन्ट' हुन्छ
अनमोल केसी उदाउँदा स्टारका रूपमा आइरहेका छन्। उनीसँग काम गर्न चाहने निर्माता-निर्देशकहरूको लाइनले यसको पुष्टि गर्छ। युवापुस्तामा लोकप्रिय यी स्टारलाई सिनेमामा खेलाउन आधा करोडसम्म दिन तयार भएका खबरहरूले उनको सिनेमामा कति 'डिमान्डेड' छन् देखाउँछ। शुक्रबारबाट उनी अभिनित फुटबल खेलाडीको कथा पेस गर्ने 'क्यापटेन' सिनेमा रिलिज भइसकेको छ।
रिलिजको पूर्व सन्ध्यामा स्टारमलमा भेटिएका अनमोल सिनेमालाई लिएर उत्साहित थिए। उनीसँगै थिइन्, डेब्यू अभिनेत्री प्रियंका एमभी। पहिलो सिनेमा त्यो पनि रूचाइएका युवास्टारसँग भएर होला उनको उत्साह पनि सिनेमालाई लिएर कम थिएन।
त्यसैले पहिलो प्रश्न यिनै उत्साहित नायिकालाई सोधियो, 'यही सिनेमाबाट किन?'
'सिनेमाको अफर पाइरहेकै हो तर म पहिला एमबिए सकेर आउँछु की सोचेको थिए तर त्यो भन्दा पहिले नै राम्रो सिनेमाको अफर पाएँ', प्रियंका भन्छिन्, 'यसमा म शहरी युवतीको भूमिकामा छु। रोलका आआफ्नै किसिम हुन्छन् यसमा आफूलाई जोड्न सक्ने पाएँ।'
हरेक सिनेमामा अनमोल नयाँ नायिकासँग देखिन्छन्। हरेक सिनेमामा नायिका राख्ने कुरामा उनको विशेष चासो र अन्तिम निर्णय हुन्छ। यसपटक पनि सुनिइदै आइएजस्तो हो ? भनेर तेरस्याइएको प्रश्नमा मुस्कुराउँदै अनमोलले आफ्नो उपस्थितिमा प्रियंकाको अडिसन लिइएको भए पनि अन्तिम निर्णय निर्देशकको भएको बताए।
प्रियंकालाई सिनेमाका लागि यसै सिनेमाकी निर्माता जिया केसीले अप्रोच गरेको प्रियंकाले खुलाइन्।
प्रियंकालाई थप कस्दै खेलाडीको कथा रहेको सिनेमालाई 'ओके' भन्दै गर्दा 'डेब्यू सिनेमामामै भूमिकाका हिसाबले खुम्चिनेबारेमा कति डर थियो?' सोध्यौं।
'खेलसम्बन्धी सिनेमा भएपनि यसमा सिनेमाका सबै तत्व छन्। संमग्र सिनेमा हेरें। सिनेमामा म मेरो अस्तित्वमा रहन्छु । त्यसैले त्यस्तो असुरक्षित महशुस गरिन।'
कथा सुनेपछि प्रियंकाले आफूलाई आफ्नो रोल 'प्लिजिङ' लागेको बताइन।
सिनेमामा प्रियंकाका अलावा अर्की नायिका पनि छिन्। उनको नाम हो उपासना सिंह ठकुरी। दुबै डेब्यू नायिकासँग काम गर्नुका सहजता असहजताका बारेमा सोध्दा अनमोलले नयाँ मान्छेसँग नयाँ ट्यालेन्ट हुने भएकाले सिकाइका हिसाबले राम्रो हुने उनको भनाइ थियो।
'दुबै जना एउटा जोश बोकेर आएका थिए। त्यो सिनेमामा दुबैले देखाएका छन्। सिनेमामा उनीहरूको उपस्थितिले सिक्ने सिकाउनेसँगै राम्रो पनि साथी भेटें', अनमोलले सुनाए।
सिनेमामा रोमान्स हुन्छ नै यसमा कलाकारबिचको तालमेलले ठूलो महत्व राख्छ। त्यसैले अनमोलले तालमेल मिलाउन दुबै नव नायिकालाई सहज बनाउन सुरूमा मित्रता बढाएको बताउँछन्।
'साथी बन्यौं। सँगै काम गर्ने भएपछि सजिलो होस भनेर घरेलु वातावरणको सिर्जना गरेर सहज बनाएँ।'
प्रियंकाले अनमोलसँग त्यसमा सहमति जनाउँदै पहिलो दिनदेखि नै अनमोल आफूहरूसँग मित्रवत बताइन। त्यसमा अनमोलको प्रयासले राम्रो काम गरेको उनको अनुभव छ।
सिनेमापिच्छे अनमोल नयाँ नायिकासँग पर्दामा रोमान्स गर्छन्।
प्रियंकालाई अनमोलले किन यस्तो गर्छन? होला भनेर सोध्दा 'भर्खर छैटौं सिनेमा त भयो। सिनेमा बढ्दै जाँदा दोहोरिएला। अब नयाँ सिनेमा नयाँ कथा भएकाले नयाँ अनुहारसँग काम गरेको होला?'
प्रियंकाको जवाफपछि यो रणनीतिका बारेमा अनमोललाई नै सोधियो।
'संजोगले त्यस्तै हुनपुग्यो। हामीसँग यसै पनि हिरोइनहरूको कमी छ। त्यसैले जति नयाँ आयो उति फाइदा हो किनकी यसले नयाँ मानिसलाई मौका र सिनेमामा कलाकार खोज्नेलाई सहज विकल्प पनि हुन्छ।'
काम गरेकी सहकर्मी नायिकासँग फेरि काम गर्ने मामिलामा आफू खुला रहेको अनमोल बताउँछन्। अर्को कस्तो सिनेमामा प्रियंकासँग फेरि काम गर्ने अवस्था हुन्छ? भन्ने कुरामा उनले प्रियंकाको आँखाको तारिफ गर्दै ऐतिहासिक कथाका सिनेमा गरेको खण्डमा प्रियंकाको आफ्नो पहिलो रोजाइ हुने बताए।
'उसको आँखा एकदम राम्रो छ। ऐतिहासिक सिनेमामा उसलाई एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यस्तो सिनेमा गर्दा प्रियंका पहिलो रोजाइ हुनेछिन्।'
अनमोलको सिनेमाले गतिलो सुरूवाती व्यापार गर्ने र हलसम्म दर्शकलाई तान्नेमा अधिकाशं वितरक र निर्माता ढुक्क हुन्छन्।
अनमोल स्वयंलाई आफ्ना पछिल्ला सिनेमाले गरेका व्यापारका अंकहरूको दबाब कहिकतै छ।
'सिनेमामाका दर्शकहरू बढेका छन्। ट्रेलर आएपछि सिनेमा र यसको विषयलाई लिएर मानिसहरूमा चासो बढेको पाएको छु। त्यसकारणले गर्दा मेरा अघिल्ला सिनेमाहरूको रेकर्ड तोड्छ जस्तो मलाई लाग्छ।'
अनमोलमाथि उनको अभिनय क्षमतालाई लिएर करियरको सुरूदेखि नै प्रश्न उठाइदै आइएको छ।
अनमोलको बुझाइमा अभिनय यतिवटा सिनेमा गरेर वा उतिवटा किताब पढेर सिकिने कुरा नभएको र गर्दै जाँदा खारिदै जाने कुरा भएकाले यस सिनेमामा ठूलो परिवर्तन नभएपनि ती पछिल्ला अभिनय भन्दा धेरै राम्रो अभिनय देख्न पाउने उनको भनाइ छ।
'अभिनय कुनै एउटा कोर्स पढेर सिकिने वा जानिने विषय होइन। यो कामका लागि आउने चरित्रहरूसँग नजिकहुँदै जाँदा सुधार्दै र सिक्दै जाने कुरा हो। त्यसैले यो सिनेमामा पनि एउटा त्यस्तै पात्र छ र दर्शकहरूले आफ्ना अघिल्ला सिनेमाको भन्दा राम्रो अभिनय पाउनुहुनेछ।'
उता मोडलिङबाट आएकाले प्रियंकालाई क्यामरा फेस सजिलो भएपनि सिनेमाका संवाद जस्ताकोतस्तै बोल्न भने केहि गार्‍हो भयो।
'एक्टिङ भन्दा पनि डबिङमा अलि गार्हो लग्यो', उनले भनिन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २०, २०७५, ०९:५६:००